PLC Ejikwa Mill Roll Mill, PLC Na-emepe Ngwakọta Ngwakọta, Ihe Nchịkwa PLC abụọ na-ebunye Milll na China
Nkọwa:Ihe njikwa egwuregwu abụọ nke PLC,Njikwa PLC Mepee Ngwakọta Mill,Ihe njikwa egwuregwu abụọ nke PLC,Njikwa PLC abụọ na-emeghe Mill,,
Home > Ngwaahịa > Abụọ Roll Mill > Ihe njikwa egwuregwu abụọ nke PLC
Abụọ Roll Mill
Roba & Plastic Production Line
Ngwaahịa nke Ihe njikwa egwuregwu abụọ nke PLC , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ihe njikwa egwuregwu abụọ nke PLC , Njikwa PLC Mepee Ngwakọta Mill suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ihe njikwa egwuregwu abụọ nke PLC R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
18 Inch PLC Njikwa inggwakọta Mill  Kpọtụrụ ugbu a
XK-160 Obere abuo na-agwakọta Mill  Kpọtụrụ ugbu a
18 Inch PLC Njikwa inggwakọta Mill
Nkwakọ ngwaahịa: mbukota plastik
Inye Ike: 50
LINA 18 Inch Graphener inggwakọta Mill na Njikwa PLC The Mass mmepụta Njikwa PLC Ọ bụghị naanị Graphener Mepee Ngwakọta Mill nwere ike ịhazi ya naanị wee bụrụ ụlọ ọrụ nke teknụzụ dị elu, kamakwa ọ na-enyere ndị obodo aka. Nchoputa di elu na nchekwa...
XK-160 Obere abuo na-agwakọta Mill
Nkwakọ ngwaahịa: Mbubata ihe nkiri plastic
LINA Nyocha Rubber Labcire Intcce Intellient abụọ Ihe abụọ a na-achịkwa LINA na-ebute ụzọ na roba na ebe a na-emepụta rọba na China. Njikwa LINA PLC Obere atingdị Okpomọkụ nke Mpempe Nke abụọ na-ebute ụzọ na ụlọ ọrụ igwe roba na rọba China. Nhazi...
China Ihe njikwa egwuregwu abụọ nke PLC Ngwa
LINA Abụọ Roll Mill nwere PLC Control sistemụ
Typesdị LINA Igwe Ngwakọta Ngwakọta abụọ nwere ike iwunye sistemụ PLC (Programmable Logic Controller) iji nyochaa usoro ọrụ igwe, dịka ịgwakọta oge, njikwa okpomọkụ na mbubata data na mbupụ. A na-etinyere ihuenyo mmetụ aka iji jikwaa sistemụ ma gosipụta data eserese. Na ntinye, enwere ike idobe ntanetị nkwukọrịta Ethernet na 20% nke akara nchịkwa.
Lina kpọmkwem PLC Control Abụọ na-akpụ akpụ Rubber Mill maka Rubber
Magburu onwe ya ọdịdị : LINA ọhụrụ imebe igwe ihe igwe na-egwe ọka na-egwuputa ihe na-arụ ọrụ yana nhọrọ nchekwa zuru oke, nke na-agba mbọ hụ na usoro usoro dị elu.
Nchedo dị nchebe: The ala adopts 360 degrees mberede ma laa azu braking ngwaọrụ, infrared akpaka nchọpụta na ergonomics nche iji hụ na ọrụ 's nchekwa.
Ọrụ ọgụgụ isi : LINA lab abụọ mpịakọta igwe na -emepụta maka nnwale ngwaahịa PLC nwere ọgụgụ isi dị nro ịchịkwa dị mfe ibubata ma ọ bụ mbupụ data na ndekọ. Izi ezi di na njikwa na nha nke ịgwakọta okpomoku na nchikota.
Usoro njikwa ọgụgụ isi PLC: 1. Ejiri data ndekọ ezigbo oge na mbupụ nke oge ikpere, okpomọkụ (agwakọta ụlọ na n'ihu / n'azụ rotors), mgbali ebule, ugbu a, iyi iyi na koodu ntinye. 2. Enwere ike ịhazi usoro nchịkwa ruo ngwakọta agwakọta 20, chekwaa oghere uzommeputa 20. 3. Igwe njikwa nwere ike ibubata usoro ntụrụndụ usoro na nlekota data, yana soro MES na-enwe nkwukọrịta Ethernet. 4. Edebere usoro nkwukọrịta Ethernet na 20% nke akara nchịkwa echekwara.
Nkọwapụta nke igwe igwe LINA Lab
of Front Roller
Nkọwapụta nke LINA Mass Production Open Mill Machine
15 Liters okpukpu abụọ Dust Providence gbasara mgbasa na Kneader
Ihe njikwa egwuregwu abụọ nke PLC Njikwa PLC Mepee Ngwakọta Mill Njikwa PLC abụọ na-emeghe Mill